Fanadiovan-tsolika - Newsway Valve Co., Ltd.
Ny fitrandrahana solika dia manondro zavamaniry iray izay mamokatra gazoala, lasantsy, solitany, solika manosotra, coke petrole, asphalt, ary etiléna avy amin'ny fizotran'ny fanadiovana, catalysis, cracking, cracking, ary hydrorefining ny menaka crude nalaina avy tamin'ny fananganana.
Ny valves novokarin'ny NEWSWAY dia afaka mahafeno tanteraka ireo valizy takiana amin'ny fanadiovan-tsolika mba hisorohana ny afo, ny fipoahana ary ny toe-javatra mampidi-doza hafa ary hiantohana ny fandefasana ireo fitaovana azo antoka.
Ao amin'ny singa fanadiovan-tsolika, singa ampiasaina matetika sy fisafidianana valva mifanentana vita tamin'ny valizy NEWSWAY:
Fitaovana katalytic: valve plug, valves manala tokana, valizy lolo avo lenta, valizy lolo pneumatika, valizy vavahady hafanana avo, valizy mahazaka hafanana avo lenta.
Famokarana hidrogen, hydrogénation, singa fanavaozana: valizy boribory orbit, valizy fanaraha-maso, valizy eran'izao tontolo izao Y, valizy lolo hydraulic, valizy avo lenta, avo kokoa noho ny 1500LB matetika ny tsindry.
Fitaovana coking: valizy roa-lalana, valizy baolina efatra, valizy plug, mifototra amin'ny valves amin'ny hafanana avo lenta, ny vy dia chrome-molybdenum vy. Valve fanamafisam-peo mafy fanerena, matetika manomboka amin'ny 1500 LB ka hatramin'ny 2500 LB.
Vovonan'ny fanamorana ny habakabaka sy ny rivotra: valizy vavahady herinaratra, vita amin'ny chrome molibdenum sy vy vy
Fitaovana solifara: valizy palitao miaro tena, valizy vavahady mitaingina, valizy baolina vita amin'ny baoty, valizy mitaingina jackets, valizy lolo miloko.
Fitaovana S-zorb: Valizy vy metaly mafy tombo-kase, takiana hitafy sy mari-pana ambony.
Vovona polypropylene: valizy baolina pneumatika vy tsy misy fangarony
Tsy misy fitaovana manokana: valizy mifehy indrindra: valizy lolo pneumatika, valizy baolina pneumatika, valizy baolina pneumatika, valizy fanaraha-maso an'izao tontolo izao sns.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny valizy baolina elektrika